ईतिहासको विरुद्ध र एन्ट्री कम्युटि -का लागि बहस गर्दै Martech Zone
मैले मेरो साथीसँग चाखलाग्दो कुराकानी गरिरहेको थिएँ, H टोपी मार्केटि ofको चाड मायर्सकसरी हाम्रो दुबै कृषि अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्रान्तिले हाम्रो आधुनिक दिनको बानी बसाल्यो भनेर छलफल गर्दै। जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको QWERTY कीबोर्ड (ती अयोग्य हुनका लागि डिजाइन गरिएका थिए कि टाइपराइटर कुञ्जीहरू टाँकदैनन्, तैपनि हामी ती उपकरणहरूमा आज प्रयोग गर्छौं जुन कहिले पनि स्टिक हुँदैन), हामी सोचविचार गरिरहेका छौं जुन १०० देखि १,००० वर्ष पुरानो हो (र अधिक) हाम्रो निर्धारण गर्न कर्मचारी र काम गर्ने निर्णय। र तिनीहरू जंगली अक्षम छन्।
कसरी कृषि अर्थव्यवस्था हाम्रो काम को आदतहरु लाई असर गर्छ
जब तपाईं बेबी बूमरहरू र उनीहरूको पारिवारिक जडान कृषिमा हेर्नुहुन्छ, in अमेरिकीहरू मध्ये १ कुनै न कुनै तरीका फार्ममा जडिएको थियो, सामान्यतया पारिवारिक फार्म। पछि, र आज पनि, तपाईं सनअपमा उठनुभयो, र सूर्यास्तको लागि काम गर्नुभयो। तपाईं राती काम गर्न सक्नुहुन्न, किनकि क्षेत्रहरू उज्यालो थिएन र ट्र्याक्टरहरूसँग हेडलाइटहरू थिएनन्। तपाईंले तिनीहरूका दिनका निम्ति काम गर्नुभयो, तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले पनि त्यसरी नै काम गरे जुन तिनीहरूका पुर्खाहरूले गरेका थिए। साधारणतया, जबदेखि हामीसँग यस संसारमा कृषि थियो, तपाईं दिनमा काम गर्नुभयो र राति सुत्नुभयो।
आजकल, हामीले त्यो गर्नुपर्दैन। हामीसँग विद्युतीय बत्तीहरू छन, हामी समय क्षेत्र भरमा काम गर्न सक्षम छौं, र द्रुत इन्टरनेटको साथ कुराकानी गर्दछौं।
औद्योगिक क्रान्तिले हाम्रो कार्य गर्ने बानीलाई कसरी असर गर्छ
१ 1800०० को उत्तरार्ध र १ 1900 ०० को शुरुतिर छिटो अगाडि, जब कारखानाहरू उदय भए र स्वचालनले मानिसहरूलाई खेतमा शहरहरूमा ल्याए। अब, केहि पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ भने, यो एक कारखानामा बनेको थियो। र किनभने मानिसहरू खेतहरूबाट आएका हुन्, तिनीहरूले फेरि 8 र between बीचमा काम गर्नुपर्‍यो।
तर अब, किनभने कारखाना एक स्थानमा थियो, काम साइटमा गर्नु पर्ने थियो। तपाईंको उपकरणहरू त्यहाँ थिए। तपाईंको उत्पाद त्यहाँ थियो। तपाईं प्रणालीको भाग हुनुहुन्थ्यो, र यदि तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्नथ्यो, प्रणाली असफल भयो। यो तपाईले देखाउनु महत्वपूर्ण थियो।
आजकल, हामी अझै देखाईनेछौं। हाम्रो काम कार्यालयको भवनमा गरिन्छ। हामीले व्यक्तिविशेषमा भेट्नु पर्छ। हामी हाम्रो सानो घन फार्ममा बस्न आवश्यक छ, र हाम्रो आउटपुट राख्न। तपाईं प्रणालीको भाग हुनुहुन्छ, तर र यहाँ के व्यवस्थापकहरू अझैसम्म महसुस गरेनन् प्रणाली असफल हुने छैन किनकि तपाईं भवनमा हुनुहुन्न।
कारणको एक अंश प्रबन्धकहरूको पक्षमा विश्वासको कमी हो। यदि तिनीहरूले हामीलाई अवलोकन गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् कि यदि हामी काम गरिरहेछौं भने। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि हामी काम गर्न सक्नुभन्दा सट्टा रमाइलो गर्न बढी समय खर्च गर्न सक्छौं। केही फरक पर्दैन कि तिनीहरूले जे भए पनि यो भन्न सक्दछन्, जब मानिसहरूले डेडलाइन पूरा गर्दैनन् र उत्पादकता माथि वा तल माथि छ, जबसम्म मानिसहरू परिसरमा छन्। तर केहि कारणका लागि, प्रबन्धकहरु सोच्दछन् कि व्यक्तिहरू हर समय उपस्थित हुनु आवश्यक छ, वा केहि पनि हुने छैन।
२१ औं शताब्दीको समस्या १ th औं शताब्दीको सोच द्वारा उत्पन्न भयो
अधिकांश निगम र सरकारी एजेन्सीहरू १ th औं शताब्दीको हिसाबले अझै सोच्दै छन् जब यो स्वीकार्य काम गर्ने समयको कुरा आउँछ। तपाईं पर्छ बिहान :8:०० देखि साँझ 00:०० बजे सम्म अफिसमा रहनुहोस्। तपाईंलाई घरबाट काम गर्न अनुमति छैन, र तपाईंलाई निश्चित रूपमा 5:00 - 9:00, वा बाट काम गर्न अनुमति छैन भगवानले नरोक्नुहोस्! 10: 00 - 7: 00।
केही वर्ष पहिले, जब म यसका लागि काम गर्दै थिएँ स्वास्थ्य विभाग इंडियाना, म आंशिक योजनाको लागि आंशिक रूपमा जिम्मेवार थिएँ कि यदि हामी पान फ्लूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा हान्यो भने हामी प्रयोग गर्ने छौं। जहाँसम्म, यो धेरै घर बाट काम गर्न सक्षम व्यक्ति वरिपरि घुमायो। सबैजनाले योजना मन पराउँथे र भन्थे यो हामीलाई चाहिएको कुरा हो।
"महान," मैले भने। “हामीले यसलाई दुई चार चोटि अभ्यासमा राख्नुपर्दछ, र निश्चित गर्नुहोस् कि सबैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले आवश्यक स्टाफलाई किinks्कहरू काम गर्न दिनेछ, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरू अनलाइन पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्, र ती सबै हाम्रो टेक्नोलोजीले काम गर्दछ। यस तरिकामा, जब हामी यसलाई कार्यमा राख्छौं, हामी सबै पहिलो दिनमा आईटी विभाग कल गर्दैनौं। "
"होईन, हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौं," प्रतिक्रिया थियो। “हामी सबैले काम गरेको यहाँ चाहन्छौं। हामी टेलिकम कम गर्ने गर्दैनौं। ”
त्यो थियो। छलफलको अन्त्य। हामी टेलिकम कम गर्ने गर्दैनौं। राज्य सरकारको सबैभन्दा ठूलो विभाग, राज्यको पान फ्लू प्रतिक्रिया को प्रभारी विभाग, र हामी छैन "हाम्रो कुकुरको खाना खाऊ" त्यसोभए, कुनै परिक्षण छैन, यसैले सम्भवतः सम्पूर्ण एजेन्सीको जवाफलाई अप्ठ्यारो पार्ने बेलामा जब समय भयो।
* लामो सास *
२१ औं शताब्दी समाधान
म यस प्रकारको सोचाइबाट पनि मुक्त छैन। एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, म संग एक बर्ष भन्दा अधिक नियमित कार्य तालिका छैन। म ढिलामा अफिसमा पुग्छु, किनकि म ढिलो सम्म बस्छु, प्रायः २:2 बजे तिर।
तर अलार्म guilty:०० बजे बन्द हुँदा म अझै दोषी महसुस गर्छु, र सोच्नुहोस्, "म अफिसमा हुनुपर्दछ", मेरो शरीरले मलाई निन्द्राबाट वञ्चित कोमामा बाध्य पार्ने धम्की दिए पनि।
यद्यपि, म मेरो अधिकांश कामहरू साँझ र रातमा गर्छु। म गैर-पीक घण्टामा अफिसमा जान ड्राइभ गर्दछु, यसको मतलब म ग्यास कम प्रयोग गर्छु। म मेरो समय खर्च गर्दछु कफी पसलबाट प्रविष्टि-कम्युटि। वा सानो क्याफे यदि कर्मचारीहरूले उनीहरूको कार्यालयी तालिकामा काम गर्न सक्दछन् भने उनीहरूको उत्तम कार्य तालिका मिलाउन कति इन्धन बचाउन सक्छ?
यदि कम्पनीहरूले यो "हामी तपाईंलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं" सोचको मोडबाट बाहिर निस्कन सक्दछन्, र घरबाट कामका लागि काम गर्नेहरूलाई नयाँ तरिकाहरू फेला पार्दछन् भने हामी हाम्रो ईन्धन खपत कम गर्न सक्छौं। हामी उपयोगिता लागतहरू कम गर्न सक्दछौं, रियल ईस्टेट र लीज लागत पनि, यदि हामीसँग सानो कर्पोरेट पदचिह्न छ भने। बैठकको अघि वा पछाडि अफिसमा समय बिताउनु पर्ने व्यक्तिको लागि बैठक कोठा, कन्फरेन्स रूमहरू, र केही क्युबिकहरू बाहेक केही नभएको मूल आकारको दशौं भागको भवन प्रयोग गरेर कल्पना गर्नुहोस्।
यदि निगमहरू र सरकारी एजेन्सीहरू २१ औं शताब्दीमा सामेल हुन सक्छन्, हामी केहि आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्न सक्दछौं। त्यतिन्जेल हामी असेंबली लाइनमा आफ्नो रेन्चहरू घुमाउनेछौं, र घोडाहरू हार्नेछौं र खेतहरू जोत्नेछौं।
टैग: यात्रा गर्दैउद्यमीकार्यालय समयकाम घण्टाघर बाट काम गर्दै
मार्स 27, 2010 मा 11: 03 एएम
उत्कृष्ट पोस्ट, एरिक। म थप्छु कि मलाई विश्वास छ कि धेरै समस्याहरू यस देशको "नेतृत्व के हो" भन्ने बुझाइको कमीबाट उत्पन्न हुन्छ। मैले भेट्ने अधिकांश अनुभवहीन नेताहरूले मानिसहरू र प्रक्रियाहरूलाई 'फिक्स' गर्नु उनीहरूको काम हो भन्ने विश्वास गर्छन्। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू नकारात्मक ... आफ्ना कर्मचारीहरूको नकारात्मक विशेषताहरू, तिनीहरूका उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग नकारात्मक मुद्दाहरू, तिनीहरूको व्यवसायसँग नकारात्मक मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्।
त्यहाँ सधैं हरेक व्यक्ति र हरेक व्यवसाय संग 'फिक्स' गर्न केहि हुन गइरहेको छ। त्यो नेताको काम होइन । नेताले आफ्ना कर्मचारीहरूमा प्रतिभा कसरी बाहिर निकाल्ने, उनीहरूका उत्पादन र सेवाहरूको बल कसरी प्रयोग गर्ने, र उनीहरूको व्यवसाय बढ्नको लागि गरिरहेको अविश्वसनीय चीजहरूको कसरी शोषण गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुपर्दछ।
दुर्भाग्यवश, हामीले मानिसहरूलाई उनीहरूको असक्षमताको स्तरमा बढावा दिन्छौं। हामी हाम्रा प्रबन्धकहरू वा पर्यवेक्षकहरूलाई मानिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे कुनै प्रशिक्षण प्रदान गर्दैनौं। यो धेरै नराम्रो छ!
मार्क्स 29, 2010 मा 8: 09 PM
तपाईं ROWE 🙂 मा काम गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ